Ukufumana iMithombo yeendaba yeNtlalontle yeShishini
Ukugxininisa: Imithombo yeendaba yeNtlalontle ekhutshiweyo yenziwe kakuhle
NgoLwesihlanu, Meyi 27, 2016 Douglas Karr
Ukubandakanyeka kwimidiya yoluntu kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo kwinkampani encinci. Ngelixa ndisebenza ngokwembono yokubeka uphawu lobuqu, ngokunyanisekileyo asizinikanga isicwangciso esiliqili kunye nezixhobo kubukho bethu beendaba zentlalo. Utshintsho lwanamhlanje, nangona kunjalo, njengoko sihamba sisebenzisa Ukugxininisa Ukukhulisa oku kulandelayo.
Sizamile ukukhutshwa kwemithombo yeendaba zentlalo ukuphucula iincoko zethu kwi-Intanethi, kodwa ngokunyanisekileyo akuzange kuhambe kakuhle. Sasidla ngokufumana uhlaziyo olubi, ukhuphelo lomxholo olungalunganga, kunye nomnikelo opheleleyo. Umnikelo ka-Emphatic, yi-bar none, eyona nto ibalaseleyo esele siyibonile ukuza kuthi ga ngoku. Ngelixa ayisosicwangciso-qhinga semidiya yoluntu, inkonzo ijolise kwiinjongo zakho ngokubanzi. Ngubani ofuna ukwenza ulwazi ngaye (amathemba, abachaphazeli, abathengi), kwaye ufuna ukuba benze ntoni?
Inkonzo yehlela kula manyathelo mathathu alula:
Yakha iprofayili - Yabelana ngolwazi olusisiseko kunye Ukugxininisa Kwaye baya kuyila iprofayile yomxholo owahlukileyo wegama lakho.
Fumana uhlaziyo lwakho - Ababhali baseMelika bazakwenza kwaye bathumele imixholo yemidiya yoluntu kuwe veki nganye.
Uphononongo kunye neshedyuli- Hlaziya uhlaziyo kwaye emva koko Ukugxininisa ndiya kuzithumela kumanethiwekhi akho.
Ulwazi olufakwe kwisicwangciso sakho somxholo lubanzi. Ukuqala ngenkcazo yenkampani yakho kunye nomthengi ofanelekileyo, ukongeza zonke iiakhawunti zakho zentlalo, ukongeza iiakhawunti ezijolise kubathengi, abachaphazeli, okanye abafowunelwa, uhlengahlengise ukuba ungakanani umxholo wangaphandle okanye umxholo wangaphakathi onqwenela ukwabelana ngawo, ukubonelela ngezixhobo eziphezulu ezinokongezwa kumxube, kunye nezihloko ojolise kuzo. Unokuseta ithoni yakho- nokuba ayisesikweni okanye isesikweni.
Ukuba uyiarhente, unokwenza iiprofayili zabathengi abaninzi, ukhethe isicwangciso esikhulu, emva koko ulungise umxholo wentlalontle yomthengi ngamnye kwaye wabele ukuvuselelwa rhoqo.
Zama ukuSebenzisa mahala!
Le ayisiyibeki kwaye uyiLibele
Gcina ukhumbula ukuba oku kukunceda ukuba ufumane, ukhawuleze, kwaye uqhagamshele usebenzisa iakhawunti yakho yemidiya yoluntu. Abasebenzi kwiarhente yethu basabelana ngokwazisa ngamajelo enkampani, babelana ngohlaziyo malunga nabaxhasi bethu kunye nempumelelo yabo, kwaye sijonga imithombo yeendaba zentlalo ukuba iphendule kuzo naziphi na izicelo. Isixhobo esinjenge Ukugxininisa ayenzelwanga ukuba ithathe indawo yesicwangciso sakho sonke seendaba; ikhona ukuze uyongeze.
Ukubhengezwa: Sisebenzisa ikhowudi yethu yokwazisa yobuqu Ukugxininisa, otyala iakhawunti yethu ukuba ubhalisa.
tags: kugxininiswaoutsource yentlalooutsource imidiya yoluntuuhlaziyo lwasasazwa kumajelo asekuhlaleniukukhutshwa kweendaba ezentlalo
Yabelana ngeeNcwadi oziThandayo eziVakalayo ngokuVakalayo
Iindlela ezili-15 zokunyusa izinga lokuGuqulwa kwe-Ecommerce